Zuva Knowledge - Poltava Medical & Dental Academy
Gunyana 1, 2016, pachiitiko Knowledge Day muna Palace yakawanda yokufaranuka “Mbudzi” dzakarongwa musangano Yedzidzo Council VDNZ Ukraine “Ukrainian Medical Dental Academy”, iro gore rino wokupemberera zvayo 95th mhembero. Pamusangano dzakarongwa wakaitirwa kuzvitsaurira kuna-gore rokutanga vadzidzi vane vakabudirira vakapfuura kukwikwidzana nesuo bvunzo uye vova nhengo dzemhuri yakakura mumwe vaitungamirira nemasangano yakakwirira dzidzo muUkraine.
In mhemberero akanga wakapindwa utungamiriri kwematunhu uye nemakanzuru masimba, mapirisita, nhengo kwokubatsira, fakaroti, vabereki uye vadzidzi pachavo-gore rokutanga vadzidzi.
Musangano Grand aivhurwa Rector of Academy, Kukudzwa Doctor rweUkraine, MD, muzvinafundo, academician of yechiUkraine Academy of Sciences Vyacheslav Nikolaevich Zhdan. Rector aigamuchira freshmen pamwe kubvuma kuhondo Academy vadzidzi uye vanachiremba yemberi vakashuva zvibereko uye inoshanda basa, nzwisisika budiriro, kuti kukunda dzakakwirira itsva zivo uye vawane vaishuva vavarira.
Akakwazisa akatendeuka yedu Dear vakokwa: Vanhu Deputy rweUkraine, Akaremekedza Scientist rweUkraine Ischeykin KE, Poltava Mayor mai AF, Mutevedzeri Director pamusoro Healthcare Poltava Regional State Administration Kurilko Yu, ake ukuru bhishopu Filaret Henichesk Novokakhovskiy uye ndiani congratulated vadzidzi sumo nomwoyo mumwe zvakanaka mumayunivhesiti munharaunda uye Ukraine uye akaratidza chivimbo chokuti vazhinji ano freshmen vanobatana Academy nokuwanza nokubudirira munyika yedu.
Kutobaya ezvinhu akatonga horo panguva kuziviswa mhiko pamusoro-gore rokutanga vadzidzi, inotungamira dzidzo, Maitiro akanaka uye tichishingaira kuwadzana nevamwe. Verenga mhiko rukudzo rworudyi mudzidzi VDNZU “MSA” akapa Porovay Olesya uye Vladimir Ksonzu. Uye munguva vachibvumirana “Ndinopika!” Freshmen kokutanga muupenyu hwavo kwenyanzvi upenyu akavafukidza majasi chena uye heti.
Maererano netsika Rector of Academy, Purofesa VM Zhdan freshman mudzidzi akapa chokufananidzira hunhu: kiyi nyika ruzivo uye mudzidzi ID.
Interesting ndiko mashoko ari muchimiro firimu mamiriro, zvechikoro, mitambo, unyanzvi nebudiriro yunivhesiti, pamusoro mikana uye yakanakisisa tarisiro anovhura freshmen chikoro. Parizvino pakanga pasina mubvunzo kuti VDNZU “Ukrainian Medical Dental Academy” – yunivhesiti edzidzo rechimanjemanje iyo anogadzira zvikuru vanonyatsokwanisa, rokusika Vanachiremba, chaiye Vanachiremba.
Panguva kunyarara mhemberero miniti muna kuyeuka rawa uyo akapa upenyu hwavo nokuda rusununguko uye kuvimbika nyika yedu.
Kuninipisa paakadzinga chete manheru Dvornik A. uye A. Lyevshyn akamirira ose vadzidzi vakaratidza kuonga kwavo vose vabereki ravanotarisira, murefu uye rusingaperi nerudo.
Vakwikwidzi pamusangano aigamuchira pevairwara uri mudzidzi collectives Academy uyo akauya nziyo dzakanaka uye vachitamba.